काठमाडौँ ५ प्रदेशसभा ‘ख’: मतदाताहरुको यसरी मन जितेका छन् कांग्रेस उम्मेदवार खड्काले (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ कार्त्तिक २९ गते २२:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ५ को क्षेत्रीय सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेर क्षेत्रका विकासमा प्रत्यक्ष रुपमा क्रियाशिल भइ रहेका क्षेत्रीय सभापति रमेश खड्का अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ५ प्रदेशसभा ‘ख’ का नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनै खड्कासंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले उम्मेदवारीको विषयमा विशेष भिडियो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
केमा केन्द्रित हुनुहुन्छ ?
चुनाबी माहोल तातेको छ । यहि कुरामा केन्द्रित छु ।
घरदैलो कार्यक्रममा यहाँहरु केन्द्रित भइ रहनु भएको छ, मतदाताहरुको कस्तो प्रतिक्रिया पाइ रहनु भएको छ ?
२०३६ सालदेखी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध रहेर अनवरत रुपमा जनताको सेवा र पार्टीको निरन्तर काम गर्दै आएको, विभिन्न चुनाबहरु मेरो नेतृत्वमा सञ्चालन गर्दै आएको छु । म बाह्रौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित क्षेत्रीय सभापति र तेह्रौ महाधिवेशनबाट मेरो कार्यसमिति नै निर्विरोध निर्वाचित भएको कारणले म जनताको माझमा त्यत्ति कै मात्रामा निरन्तर भिजि रहेको छु ।
यो निर्वाचनलाई खास गरेर जुन वाम गठबन्धन छ त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक रुपमा लिएको छौँ र जनताहरुले पनि त्यस्तै महशुस गरि रहनु भएको छ किनभने एमाले र माओवादी पनि प्रजातन्त्रलाई मान्छु, बहु–दललाई मान्छु भनेर आएका थिए । गठवन्धन पछी यो संविधान हामी फेर बदल गर्छौ, दुई तिहाइ ल्याउछौँ, कम्युनिष्ट शासन लागु गर्छौ, राष्ट्रपति शासन लागु गर्छौ भनेर वाम गठबन्धन अगाडी बढेको बुझिन्छ यो अस्वभाविक छ ।
यहाँहरु पनि आफ्नो गठवन्धन सहित उम्मेदवार बन्नु भएको छ, यहाँको क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
नेपाली कांग्रेसले दुइ पटक लगातार चुनाव जित्दै आएको छ । अघिल्लो चुनाबमा जसलाई हामीले हराई रहेका छौ उही नै अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धिको रुपमा हुनुहुन्छ । जो अर्को घटक माओवादी उहाँसंग मिलेको छ त्यसको अनुपातमा हामीसंग मिलेको राप्रपाको मत बढि छ । त्यसले पनि हामी बलियो छौँ ।
अहिले क्षेत्र नम्वर ५ प्रदेशसभा ‘ख’ को उम्मेदवार बन्नु भएको छ, क्षेत्रसंगको सम्वन्ध यहाँको कस्तो छ ?, के भन्नुहुन्छ ?
क्षेत्र नम्वर ५ मा नै म जन्मेको हुँ । हुर्केको, खेलेको, पढेको हुँ । मलाई त यो क्षेत्र मेरो घर, आगन जस्तै लाग्छ । टोखाको चण्डेश्वरी, बुढानिलकण्ठको डाडा गाउँ, हाडिगाउँ, लाजिम्पाट, महाराजगञ्ज, बासबारी, हात्तिगौडामा म सानैदेखी नै म परिचित छु । जसको कारण मेरो लागि यो क्षेत्र आफ्नो घर, आगन जस्तै लाग्छ ।
यहाँको उम्मेदवारी किन र केका लागि ?
खासगरी नेपाली कांग्रेसले बहुवाद, बहुदलिय व्यबस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आफ्नो सम्पतिलाई आफैले राख्न पाउने सुनिश्चितता, वाक स्वतन्त्रतालाई अंगाल्दै आएको छ र त्यसको लागि म लड्दै आइरहेको छु । त्यसलाई दिगो बनाउन र अहिलेको संविधानको मर्मलाई कार्यन्वयनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । यसैगरी म स्थानिय व्यक्ति पनि हुँ । यहाको दैनिक रुपमा आई पर्ने समस्याहरु, विकास निर्माणमा आइ पर्ने कठिनाईहरुको निवाकरण गर्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।
यहाँबाट क्षेत्रबासीहरुले के पाए ?
अहिलेसम्म जननिर्वाचित भएर जनतामा जाने मौका पाएको छैन । पार्टीको माताहतमा रहेर सामाजिक काम गर्दै आएको छु । पार्टीमा रहेर पनि बासबारी प्रहरी सेवा केन्द्रको अध्यक्ष भएर काम गरे । त्यसबाट पनि धेरै सामाजिक गतिविधिलाई अगाडी बढाएको छु । जनप्रतिनिधि नभए पनि मैले क्षेत्रका जनताहरुको हरेक सुख–दुःखमा साथ दिएको छु । यहाँका स्थानियबासीहरुलाई सोध्नु भए पनि हुन्छ, मैले उहाँहरुलाई सक्ने सहयोग गरेको छु ।
मतदाताहरुको साथ, सहयोग पाउने कुरामा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
म एकदम ढुक्क छु किनभने मतदाताहरु मेरो साथी, छिमेकी, सहकर्मी हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रको सबै ठाउँबाट म परिचित पनि छु । हिजोको दिनहरुमा र अहिले पनि उहाँहरुको समस्याहरुको समाधानका लागि तल्लिन छु । यस हिसाबले पनि मतदाताहरुको साथ पाउने कुरामा ढुक्क छु ।
रमेश खड्कासंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः